अक्सिजन लुकाउने गोदाममा छापा, ७२ सिलिन्डर भेटिए – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : धनगढी :
अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेका बेला एक औषधि व्यवसायीको गोदाममा भने भरिएका ५० र खाली ११ गरी ६१ सिलिन्डर भेटिएको छ। धनगढीको अमित मेडिसिन डिस्टीब्युटर्सले सिलिन्डर लुकाएको सूचना पाएपछि प्रशासनको टोलीले बुधबार गोदाममा छापा मारेको हो।
‘नजिकै निजी अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीका आफन्तले दिएको सू,चनाका आधारमा उनको गोदाममा छापा हानेका हौं’, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका शाखा अ,धिकृत यादव भण्डारी, वाणिज्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख कमल पुन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि अनुगमनमा गएका थिए।
बस्नेतले डल्केबर ग्यास उद्योगबाट केही दिनयता २ सय ५० सिलिन्डर किनेको स्वीकार गरेका छन। उनले २५ हजारका दरले किनिएका अक्सिजन भरिएका सिलिन्डर बजारमा ४० हजारमा बिक्री गरिरहेको खुलेको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकालाई उनले ४० हजारमा सिलिन्डर जति पनि किन्न सकिने बताएको स्रोतले बतायो।बस्नेतले आफुले सरकारी अस्पताललाई सिलिन्डर सप्लाई गर्ने गरेकाले यती मात्रामा गोदाममा राखेको जनाएका छन्। ‘म अक्सिजनका सिलिन्डर पनि विक्रि गर्छु। त्यसका लागि मगाएको हुँ’, उनले भने।
बजारमा अभाव भईरहेको र नजिकै रहेका अस्पतालहरुमा बिरामीको ज्यान गइरहेका बेला यत्तिका सिलिन्डर गोदाममा राखेकाले त्यो कालोबजारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अ,धिकृत भण्डारीले बताए। प्रहरीले मंगलबार राति ६ सय ५० सिलिन्डर गोदाममा फेला परेको सूचना स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिए पनि बुधबार पत्रकारको उपस्थितिमा हानिएको छापामा ६१ वटा मात्रै फेला पारिएको हो।
बस्नेत गत वर्ष सरकारी दस्तखत छाप किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनले कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालको औषधीको टेन्डर लिन आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अ,धिकृतको हस्ताक्षर र सरकारी छाप न नक्कली बनाएर कागजात पेश गरेको पाईएको थियो। उनले किर्ते गरी ८ करोडका तीनवटा ठेक्का हात पारेको खुलेको थियो। उनी जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका थिए। उनलाई, आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ३५ लाख राजश्व ठगी गरेको भन्दै जरिवाना गरेको थियो।
अझै अपुग भएपछि अस्पतालले सोमबार फेरि त्यही सूचना फेसबुकमा राख्यो। अस्पतालमा बिरामीको चाप यति धेरै बढेको छ कि भएका सिलिन्डरले धान्न सकिरहेको छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेयले कोरोना अस्पतालका लागि मात्रै दैनिक ८० देखि सय सिलिन्डर आवश्यक रहेको बताए। अस्पतालसँग आफ्नै र बजारबाट संकलन भएका १ सय ९० वटा सिलिन्डर छन। तीमध्ये दैनिक सय सिलिन्डर कोभिड अस्पतालमा मात्रै खपत हुन्छन्।
प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट पनि छ। त्यहाँबाट उत्पादन गरिने अक्सिजनबाहेक उसलाई दैनिक सय सिलिन्डर आवश्यक परेको हो। त्यो प्लान्ट अस्पतालका आईसीयू, सर्जिकल, प्रसूति, एनआईसीयूसहितका वार्ड, कोभिडको आईसीयु वार्डमा पाइपबाट जडान गरिएको छ। कोभिडको आईसीयू अस्पतालकै पुरानो भवनमा रहेकाले त्यहाँ पाइप लाइन छ।
प्रदेश सरकारले बनाएको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल अलिक टाढा रहेकाले त्यहाँका सबै बिरामीका लागि सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिनुपरेको छ। तर, कति बेला प्लान्टको मेसिनले काम नगरेपछि अक्सिजनको प्लो कम आउने भएकाले पनि त्यसको मुहानमा ८–१० सिलिन्डर जोड्नुपर्ने अवस्था आउदा समस्या हुने गरेको छ। ‘सघन उपचार कक्षका बिरामीलाई अक्सिजनको प्लो कम भयो भने प्लान्टको मुहानमा ८–१० सिलिन्डर जोडेर सप्लाई दिनुपर्छ। चौविसै घण्टा अक्सिजन प्लान्ट चलेकाले यस्तो भएको हो’, डा. पाण्डेयले भने, ‘अहिले कम्तीमा पनि अस्पताललाई तीन सय सिलिन्डरको आवश्यकता छ।’
कोभिडका बिरामीलाई नर्मल बिरामीभन्दा चार गुना बढी अक्सिजन चाहिने उनले बताए। ‘हामीले सिलिन्डरका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने, ‘बिरामीको चाप बढिरहेकाले छिटो सिलिन्डर आवश्यक परिरहेका छन।’ अन्नपूर्णपोस्ट मा खबर छ ।
Prevहारगुहार गर्दापनि सङ्क्रमित बोक्नै मान्दैनन् एम्बुलेन्स चालक
Nextअढाई अर्बको कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् तर मालिक भने साइकल चढेरै दैनिकी चलाउँछन्